जापानमा बाढी, पहिरो र डुवानमा परेर २० जनाको मृत्यु – Allindiabc
Home/ताजा खबर/जापानमा बाढी, पहिरो र डुवानमा परेर २० जनाको मृत्यु
जापानमा बाढी, पहिरो र डुवानमा परेर २० जनाको मृत्यु
असार २२, टोकियो । जापानमा व्यापक वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुवानमा परेर कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ ।
घटनामा परेका अरु केहीलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि अस्पताल लगिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
उद्धारकर्ताहरूले डुवानमा परेको क्षेत्रका बासिन्दालाई घरको छतमा बस्न र उद्धारका लागि खबर गर्न आह्वान गरेका छन् । खबर आएकाहरुलाई सैनिक र हेलिकोप्टरबाट उद्धार पनि गरिएको छ ।
डुवानमा परेकाहरुलाई खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको उद्धार कार्यमा खटिएका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धार गर्न र उनीहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्न विषेश टोली खटाउनुभएको छ । डुवानमा परेकाहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको उद्धारकर्ताहरुले जनाएका छन् ।
अन्य समाचार, रामेछाप – ७० वर्ष हाराहारीका नरबहादुर सुनुवार खल्तीमा छोराको फोटो बोकेर एकाबिहानै उमाकुण्ड गाउँपालिका कार्यालय आइपुग्नुभयो । छोराको फोटो खल्तीबाट निकाल्नुभयो र भन्नुभयो, ‘मेरो छोरो मलेसियाबाट आएन, फर्काइदिनुपर्‍यो, तपाईँहरुले अहिले विदेशबाट मान्छे ल्याउन सहयोग गरिरहनुभएको छ रे नि ।’ पालिकाले गाउँबाट विदेश गएका युवाहरुलाई गाउँमा ल्याउन पहल गरिरहेको खबरले नरबहादुरको मनमा आफ्नो छोरो पनि फर्काइदिन्छन् कि भन्ने आश पलायो ।उहाँलाई लागेको छ, पालिकाले सहयोग गरेमा महामारीको बेला छोरो टुप्लुक्क घरमा आइपुग्छ ।
उहाँको मनमा आशा जगाउने थ्रुपै कारणहरु छन् । एक त ठाउँ ठाउँमा अहिले अरुका छोरा फर्किएका छन् । नेपालमा जस्तै परदेशमा पनि कोरोनाले काम र कमाइ भएको छैन होला भन्ने अनुमान पनि लगाउनु भएको छ उहाँले । गाउँघरमा कमाइ भएन, कमाएर फर्कन्छु भनेर परदेश गएको छोरो, कमाइ नहुँदा फर्कन्छ कि भन्ने आश पलाएको छ नरबहादुरको मनमा ।
नरबहादुरको घर रामेछापको गुप्तेश्वरमा पर्छ । सदरमुकाम मन्थलीबाट झण्डै पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ गुप्तेश्वर पुग्न । उब्जाउ हुने हो भने परिवारको भोक मेटाउन पुग्ने बारी छ गाउँमा । ७० वर्ष हाराहारीका श्रीमान श्रीमती बाहेक कोही छैनन् घरमा । हुनलाई त उनीहरु तीन भाइ छोरा र एउटी छोरीको धनी हुन् । तर बलिया पाखुरा हुनेहरु कोही छैनन् घरमा ।तीन भाइ छोराहरु सुखको खोजीमा शहर पसेका छन् । माइला छोरा धनबहादुर सुनुवार धन कमाउन मलेसिया गएको ६ वर्ष पुग्यो । गाउँमा हलो जोतेर बस्नुभन्दा मलेसिया गएर दुःख गर्छु भन्दै मलेसिया लाग्नुभएको थियो धनबहादुर ।
छोराको चाहना पूरा गर्न १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर पठाउनुभयो नरबहादुरले । तर कमाउने र जमाउने आश देखाएर परदेशिएको छोरो आफैं बेखबर भएका छन् ।
खल्तीमा बोकेको मोबाइल फोनको घण्टी बज्दा पनि माइला छोराले फोन गर्‍यो कि भनेर झस्किने सुनुवार दम्पती एकैछिनमा निराश हुन्छन । ‘छोरा तिमी जहाँ भए पनि एककल मेरो मोबाइल नम्वर ९८६२७३२५०४ मा फोन गर,’ म’हामा’री छ, रोग लाग्ला होस् गर,’ धनबहादुर छोरालाई आग्रह गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘मिल्छ भने अरु साथीहरु जस्तै नेपाल फर्किएर आउ, बरु नेपाल आउने खर्च छैन भने म व्यवस्था गरिदिन्छु ।’ सिर्जना बस्नेत/ उज्यालो
आउ घर छ छर छरलई त दख नभए पठउछ पस बपतत बबक बर म मलसयम महमरम य वरष सनदश
आयो विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि खुशीको खबर
देश सिगार्ने कुलमान साच्चै भगवान हुन…हेर्नुहोस् । साथ दिनेहरुले मात्रै सेयर गरौ !
बढ्यो अमेरिकी डलर सहित केही देशको भाउ ! हेर्नुहोस् आजको विनिमयदर